के हो नेपाल राष्ट्र बैंक, के छन यसका उद्देश्य र भूमिका ? - Everest Dainik - News from Nepal
के हो नेपाल राष्ट्र बैंक, के छन यसका उद्देश्य र भूमिका ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि हरेक मुलुकमा एउटा केन्द्रीय बैंक रहेको हुन्छ । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि केन्द्रीय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ । मुलुकका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा सञ्चालन हुन्छन् । सरकारको आर्थिक गतिविधि हेर्ने काम पनि राष्ट्र बैंकले गर्छ भने मुद्रा व्यवस्थापनको काम पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गर्ने गर्दछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक तत्कालीन राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ अनुसार २०१३ साल वैशाख १४ गते स्थापना भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक मुलुकको केन्द्रीय बैंक भएकोले यसले मूलतः मुलुकको मौद्रिक प्रणालीलाई सञ्चालन र नियमन गर्दछ । यसैले केन्द्रीय बैंकलाई मौद्रिक अधिकार र नियामक संस्था पनि भन्ने गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने, नीतिको सञ्चालन गर्ने, सरकारको बैंक तथा बैंकहरुको बैंकका रुपमा भुमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ । हरेक मुलुकमा एउटा मात्र केन्द्रीय बैंक रहन्छ जसको अर्थ कुनै पनि मुलुकको मौद्रिक प्रणालीको नियामक तथा सुपरिवेक्षकीय निकाय हो । नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुभन्दा अघि २००२ सालमा सदर मुलुकी खानाबाट नेपाली नोट निष्काशन गरिएको थियो ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०१२ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका उद्देश्यहरु :
याे पनि पढ्नुस सुमार्गीकाे पैसा फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले अालटाल गरेकाे खुलासा
५. नेपालको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको सम्बद्र्धन गरी सो प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने
ट्याग्स: Nepal Rashtra bank, Role of Central Bank